Oggolaanshaha iyo Dhalinyarada | Abaalmarinta Abaalmarinta: Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Sharciga Ogolaansho iyo dhalinyaro
Arinta ogolaanshaha galmada iyo dhalinyarada waa mid adag.
Da'da ogolaansho nooc kasta oo jimicsi waa 16 labadaba raga iyo dumarkaba, sidaa darteed waxqabadka galmada ee u dhexeeya qof weyn iyo qof ka hooseeya 16 waa dambi. Da'da ogolaanshaha waa isku mid ahaansho jinsi ama jihada galmada.
Galmada galmada (faleebo, futada) iyo galmada afka ah ee dhalinyarada da'doodu tahay 13-15 ayaa sidoo kale ah dembi, xitaa haddii labada qof ee rafiiqa ah ogolaanayaan. Difaaca suurtogalka ah ayaa noqon kara in mid ka mid ah lammaanayaashu ay aamminsan yihiin kuwa kale inay noqdaan 16 ama ka weyn.
Waxaa jira difaaca suurtogalka ah haddii dhaqdhaqaaqa galmadu uusan ku lug laheyn galmo ama galmo afka ah. Kuwani waa haddii qofka waayeelka ah uu rumaysan yahay in qofka dhalinta yar ee da'diisu tahay 16 ama ka weyn oo aan hore loo soo oogin dembi la mid ah, ama farqiga da'da uu ka yar yahay laba sano.
Tilmaamaha Dawlada Iskotishka wuxuu qirayaa in aan kiis kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada galmada ee 16s ay yeelan doonaan welwelka ilaalinta ilmaha, laakiin dhalinyaradu weli waxay u baahnaan karaan taageero xagga xiriirka galmada iyo xiriirka galmada.
Tani waa wax yar video ogolaanshaha arrimaha galmada. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu furo dood ku saabsan mawduucan muhiimka ah. Inkasta oo dadka qaarkiis u maleynayaan in wadahadalada ku saabsan galmada ay tahay inay noqdaan waalidiinta kaligood, waxaa jira door qiimo leh oo loogu talagalay iskuuladu inay ciyaaraan gaar ahaan barashada sayniska ka dambeeya saameynta sawir-gacmeedka Waalidiintu waa inay la socdaan xawaaraha horumarka aaggan sidoo kale inay si joogto ah ula sheekaystaan ​​carruurtooda. Waalidiintu waa kuwa ugu horreeya ee lagu daydo iyo dadka mas'uulka ka ah nolosha ilmo kasta, si kasta oo ay u muuqdaan caasiyiin
Oggolaanshaha dhaqdhaqaaqyada galmada waa arrin aad u macaan leh, gaar ahaan dhallinyarada iyo da'yarta. Qof kastaa wuxuu ka hadlaa jinsi, dad badanna waxay ku tartamayaan midba midka kale si ay u arkaan cidda ugu horaysa ee tijaabin doonta hawlaha cusub. Fursad aad u fara badan oo la xidhiidha filimada jilicsan ee kumbuyuutarrada iyo kumbuyuutarrada ayaa micnaheedu yahay, in dhallinyaradu baranayaan jinsiga iyo 'jacayl' ka soo jeeda jilayaasha ganacsiga ee jilicsan, sida badan waalidku waxay ka heli lahaayeen abhorrent. Pornography maanta maaha mid jilicsan Nooca Playboy majaladaha la soo dhaafay. Rabshadaha, gardarrada iyo kufsiga galmada ee ka dhanka ah haweenka ama ragga dheddigga ah ayaa caadi ka ah ugu yaraan 90% fiidiyowyada si xor ah loo heli karo. Daawashada maalin kasta ee qalabkan sanado kahor intaan si dhab ah loola kulmin qof dhab ah waxay si dhab ah u xumayn kartaa fahamka dhalinyarada, lab ama dhedig, waxa aamin ah, jacayl, galmo ogolaansho ah.
Gabdhaha waxay rabaan inay ku raaxaystaan, loo arko inay yihiin jinsi ahaan soo jiidasho oo guud ahaanna waxay u furan yihiin jacaylka. Tani macnaheedu maahan inay diyaar u yihiin galmo. Waxay kaliya baranayaan sida loola macaamilo jidhkooda jinsi ahaan loo xaday. Maaddaama ay ku dhaqmaan oo ay isku dayaan inay muuqdaan iyo dabeecado cusub, waxay u ekaan karaan sida qowlka guurka. Barashada xuduudaha iyo samaynta khaladaadka waa qayb caadi ah ee barashada isgaarsiinta. Mid ka mid ah haweeney da 'yar oo 16 ah,
"Ma aqaano waxa aan doonayo. Waxaan rabaa in aan jeclaado ... Waxaan doonayaa inaan isku dayo waxa dadka kale ka hadlayo oo sheegaya inay sameynayaan. "
Waxay sidoo kale sheegtay in lagu riixay inay sameyso ficil galmo oo ay ka qoomameysay kadib. Ma rabto in lagu ceebeeyo sidii dulaal. Gabdho badan ayaa u maleeya inay “anshax xumo” tahay in wiil la joojiyo ka dib markay bilaabeen inay 'isku soo dhowaadaan oo ay shakhsi ahaadaan'. Haweenka da 'kasta ha lahaadeene waxay u baahanyihiin inay bartaan sida wax loo muujiyo oo loo sameeyo xuduudo cad waxa ay ku qanacsan yihiin inay sameeyaan.
Boys dhinaca kale waxay leeyihiin tamaradan awood galmoodka ah oo ay doonayaan in ay tijaabiyaan wadista wadada. Waxay sidoo kale rabaan in loo arko inay yihiin ragga dhabta ah ee ragga kale. Waxay noqon karaan kuwo aad loo go'aamiyo lana mideeyo oo lagu gaaro hadafyadaas. Xoriyadda ragga koox ahaan waa mid aad u xoogan marka loo eego rabitaanka isku xidhka dammaanadda ama lammaanaha. Waxay kaliya baranayaan inay xakameyaan awoodda galmada ee cusub ee jidhkooda. Waxay sidoo kale u nugul yihiin inay sameeyaan khaladaad culus oo ku saabsan waxa rafiiqa runtii oggol yahay.
Marka jidhku isbeddelayo xoogaa, miyir beelid, calaamadaha galmada, macnaheedu ma aha in maskaxda qof kasta uu diyaar u yahay inuu galmo la galo si la mid ah kan kale. Mana aha marwalba ragga xoogga leh, dumarka badankood waxay hogaamiyaan hogaaminta dhaqanka galmada. Tani waa halka ay ka mid yihiin arimaha jilicsan ee ogolaanshaha, isku dayey kufsi iyo kufsi kor u kaca.
Waxbarashada dhallinyarada ku saabsan isgaadhsiinta xaaladaha adag waxay fure u tahay horumarinta galmada caafimaadka leh.